China Yakagadziriswa Industrial chassis Quotation - Fekitori - Goldenor Electronic Technology Co, Ltd.
Imba >Zvigadzirwa >Industrial chassis
Horizontal plug-in 2U maindasitiri chassis
Materialï¼š1.0-1.2 mm gobvu rakasimba-rakasimba simbi (SGCC);
Jira repamberi rakakangwa nehupfu hutema, uye muviri wechasisi hauna kupendwa;
Tsigira mamaboardï¼šSupport 12 "x10.5" uye Mudiki saizi mamaboard;
Ipfupi 4U maindasitiri chassis
Iyo yepamberi pani yakagochwa neupfu hutema, uye iyo chassis muviri haina kupendwa; â € ‹
Yakareba 4U maindasitiri chassis
Ruvara: Iyo yepamberi pani yakagochwa neupfu hutema, uye chikuru casing muviri hauna kupendwa;
Kuwedzera mabheti: Iyo 1.1 * 3.5 "HDD bracket inogona kubata 4 3.5" HDDs. 2.1 * 2.5 "HDD bracket inogona kubata imwe 2.5" HDD.3.1 * ODD magnetic rack, inogona kubata 3 * 5.25â € ³CDROM.4.1 * SLIM CD .5.1 * 120 * 120 * 25mm fan fan.6.1 * Yakareba kadhi gadhi kadhi mubati.
Chinyorwa: 1.0mm gobvu rakasimba-rakasimba simbi (SGCC);
Ruvara: Iyo yepamberi pani yakagochwa neupfu hutema, uye iyo chassis muviri haina kupendwa;
Kuwedzera mabheti: 1.1 * 3.5 "HDD bracket inotsigira 3 3.5" HDD. 2.1 * 2.5 "HDD bracket inotsigira 4 2.5" HDDs.3.1 * ODD magnetic rack, tsigira 1 * 5.25 - CD ROM, 1 3.5â € ³HDD kana 8 2.5â € ³HDD
Kubheka Varnish 4U maindasitiri chassis
Ruvara: Paint nhema jecha patani pane yekunze nzvimbo
kutonhora sisitimu: Iyo yekumashure pani inotsigira maviri 8025 mafeni, yepamberi pani inotsigira imwe 12025 fan uye 3.5â € ³HDD bracket inotsigira imwe 8025 fan kuona yakakwana kupisa kupisa kudzora zvinodiwa;